Firefox inotambura nevashandisi vemamirioni makumi mashanu | Linux Vakapindwa muropa
Firefox inotambura nevashandisi vemamirioni makumi mashanu. Kuwa kwayo kuchasvika kupi?
Pakutanga kwegore rino takanyora chinyorwa nezve kuderera kwe Firefox. Pakutanga kwayo zvinotaurwa kuti Mozilla yakasiya chinangwa chayo chekuwedzera rutsigiro rwemberi webhu -apps (PWA), asi isu taigona kutaura nezvezvimwe zvinhu zvine makwikwi uye zvaisingape gava (kana koala, kune vakawanda purists). Nezvikonzero zvakadaro, uye tichitarisa manhamba, sevha yakaedza kujaira kushandisa zvakare chromium-based browser, uye ini pakupedzisira ndaramba ndakanamatira naVivaldi seyangu yekutanga webhu browser.
Nechikonzero ichocho, nekuve ndisina kutendeka kuFirefox, nhasi ndanzwa kuverenga kwakaipa zvishoma itsva iyo inoona kuti ndiyo chete imwe nzira chaiyo yeChromium (kunze kweSafari) yakarasikirwa nevashandisi mamiriyoni makumi mashanu mumakore matatu apfuura. Izvo zvakare hazvibatsire kudzikamisa midzimu ndeyekuti Mozilla pachayo atumira ruzivo, kana rwekushambadzira, ndinofunga, chinhu chakanakisa kungave kusapa yakadaro yakaipa data.
Kutsakatika kweFirefox kwaizotungamira kune iyo Chromium monopoly
Dambudziko nderekuti Firefox ndiyo yega nzira iyo vashandisi veLinux neWindows vanayo kana tisingade kushandisa chromium. Kana ikanyangarika, isu tese tichafanira kushandisa injini inopihwa neGoogle, kunyangwe mabhurawuza akaita saBrave kana Vivaldi anowanzo "kurodha" zvese zvakaipa.
Zvikonzero zvekubuda uku zvinogona kuve zvakasiyana kwazvo. Kune kutanga, nhare mbozha dzinokurukurwawo pano, uye Chrome inoiswa ne default mu Android. Kana vari vashandisi veWindows, ini handishandisi, asi ikozvino izvo Edge zvave nani uye zvinowirirana neChrome / Chromium, ndingangodaro ndinonamira nazvo nekuti zvese zviri nani zvakabatanidzwa. Kune rimwe divi, injini yekutsvaga yeGoogle ndiyo inonyanya kushandiswa pasi, uye inowanzo kuratidza kushambadzira kwatiri kuti tiise browser yayo, Chrome.
Asi hazvisi izvo zvoga. Kune masevhisi anongowanikwa chete kuChromium-based browser, izvo zvandaive ndichitarisa programmer ichishanda isingasviki vhiki rapfuura uye, ndichiri kushandisa Mac, yaishandisa Chrome kutarisa kodhi yayo. Kana kune izvi zvese tinowedzera iyo Firefox kare haipe chero chinhu chega kana kutsvagisaIni handidi kuzvitaura saizvozvo, asi iwo makumi mashanu emamirioni achiri kuita mashoma kwandiri.
Zvese izvi zvakatsanangurwa, handifunge kuti Firefox ichanyangarika, asi shongwe refu dzakawa. Ndingadai ndisingafare kana zvikaitika, asi handishamiswe nezviri kuitika kunyangwe zvirizvo yakaiswa nekusarudzika mukugovera kwakawanda Linux. Kuvandudza kana kufa. Tichaona zvinoitika kune ino ingano webhu browser.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox inotambura nevashandisi vemamirioni makumi mashanu. Kuwa kwayo kuchasvika kupi?
kana ikaenderera seichi firefox ichafa: '(
Ini ndinogara ndichisuwa yakavakirwa-mukati muturikiri muFirefox. Mamwe mapeji, senge Reddit kana Quora, haashande nemushanduri wewebhu, uye unofanirwa kuiverenga zvishoma nezvishoma muChirungu kana kuteedzera iwo mavara kuti ududzire.
Tinofanirwa kushambadza hwaro hongu kana hongu, chinja iko kutonga
Ini ndakatsiva muturikiri neDratiatium (yeUbuntu) uye, kunze kwekopi nekuteedzera ruzivo, zvakakwana.
Chinhu chekutanga chavanofanira kuita kuchengetedza Mozilla vachishandisa Firefox kwaizouya nekupfura SEO yavo, kuisa mumwe munhu akakomba, muzvinabhizimusi wechokwadi uye mainjiniya emakomputa anotarisa pazvigadzirwa zvaanopa uye anosiya kumashure ese iwo mishandirapamwe yavanotangisa gore rega rega Nezve chengetedzo yeinternet. , kuzvitonga nekumwe kumanikidza kuedza kuita mimwe mitemo isingabatsiri (kunze kwekuomesa matambudziko zvakanyanya).
Yechipiri yaizobva mukuparadzanisa vanogadzira zvakananga veMozilla mumapoka ebasa, uye kukurudzira nharaunda inoshanda pamwe nemapurojekiti nekupa mibairo yemhando yekubhadhara kune iwo matimu enharaunda anopa zvakanyanya mukati memwedzi.
Sechinhu chechitatu, zvikwata zvekushanda kweprojekti zvinofanirwa kuve zvakapatsanurwa, kuitira kuti rimwe nerimwe riitarise pane rakatarwa basa, rimwe riri kusimudzira, kugadzirisa pamwe nekuvandudza zviyero, imwe yakanangana nekutarisa zvikanganiso uye kugadzirisa kweinjini yekupa, nezvimwewo yakanangana nekuona iwo anonyanya kushandiswa anowedzera ma-ons kuti aiswe mune default browser pamwe nemvumo uye rutsigiro rwevagadziri vavo, imwe pane chengetedzo uye imwe pane zvakavanzika (zvichingodaro).
Nekuti mashandiro aMozilla ekushanda makore ano anoita kunge akakura, vanowedzera simba ravo muchinhu chimwe kuti vazviite nemazvo asi vachiregeredza zvimwe zvese uye neruzhinji rwemunharaunda ndinokutendai nerutsigiro rwenyu, musakanganwa kusaina tsvagiridzo kuti musimbise kusavimbika. mitemo (Kunyangwe chero munhu ane minwe mina yehuma achiziva kuti iyo Mitemo mirawo mitemo inogadzira monopolies uye mimwe mitemo haigadzirise), kurwira kubatana kwenzvimbo pasina kusarura uye pasina kupokana kwepfungwa ... Uye zvimwe zvinofambira mberi zvisina maturo zvegirazi vanhu.
Este. Ivo vanofanirwa, kungave kana kwete, moto kana kuvandudza avo vakuru vakuru avo vanongoziva chete kukwidza mihoro yavo vachibvisa mazana evakagadziri gore rega.
Huni dzinodiwa kupisa Firefox dzinosiya zvakanyanya kudiwa, kureva kuti, Firefox haizonyangarika, kana nerubatsiro rwunozoita kumira kurega kukanda huni dzakawanda pamoto, tinonzwa zvakanaka neFirefox services
Regerera kusaziva kwangu, ndiri mushandisi akatendeka uye akavimbika weFirefox, ndeapi masevhisi anongowanikwa kune vashandisi vechromium-based browser?
Ini handizvinzwisise… ndinoda Firefox, ibrowser rangu pane zvese zvishandiso zvangu
Ndakaedza kujairira Chrome, Opera, Akashinga asi ini handioni chero zvakanakira, ini ndichiri muFirefox
Hee hee akadaro
Iwe unogona here kudaidza chimwe chinhu mahara "monopoly"?
Ini ndinofunga kushamisira kwevamwe vanhu kweFirefox kupusa.
Chromium inogona kuchinja zvaunoda, kuwedzera uye kubvisa zvaunoda.
Izvo zvaive zvinopfuura kuratidzwa neFooC, kuti Google hairemekedze iyo Chromium-yakavakirwa mapurojekiti. Kana chimwe chinhu chiri chemahara, iwe unogona kubvisa izvo izvo vanogadzira vanofunga kunge zvinopesana nehunyanzvi hwavo.
Chromium haisi yeInternet Explorer yeGoogle, nekuti Google yakagadzira chimwe chinhu chisiri cheimba Open Open.
Gamuchira iyo chokwadi chekuti Chromium yakajairwa, zvinoita kuti hupenyu huve nyore kune vanogadzira.
Uye usazoenda pane iyo nyaya yekuti "Firefox haisi nhamba yekutanga nekuti haina kuuya isati yaiswa." Izvo zvakapusa, asi nekuti gore rega rega Firefox inorasikirwa nevashandisi vazhinji paLinux zvekuti ine pre-yekuisa monopoly.
Dzimwe nzira dzemahara sedzakashinga dzinoita benzi reFirefox, uye chinhu chinosekesa ikambani yemumwe wevakavamba veMozilla Foundation uyo akasarudza kusiya ngarava inonzi Mozilla zvisina chinangwa.
Pindura Jei Jei
Ini ndagara ndiri mudiwa weFirefox uye zvinondishungurudza zvikuru kuona kuti zvishoma sei iri kudonha ... :(
Firefox ichapona chete, zuva iro mozilla rinoziva zvavanazvo mumavoko avo, ndiro dambudziko, haisi imwe, chete izvozvo, havana ruzivo rwezvavari chaizvo mumawoko avo, bhurawuza chete rine chokwadi kugona kuburitsa chrome, kana ikasavhura imhaka yekuti vagara vakatarisa pane zvakawanda zvegilopolleces pane kungotarisa ivo chete uye chete kubrowser yavo, dai ivo vaigara vachiisa simba rakanyanya mubrowser yavo, imwe jongwe yaigona kuimba ivo.
Firefox yaive pamberi pechrome. Zvakanaka, kubva ipapo, ndipo pavanofanirwa kunge vakatanga kunetseka. Muenzaniso wakajeka: Firefox yakatovepo, chrome isati yavapo, chrome inoerekana yabuda uye painongobuda inokurumidza kupfuura firefox uye ndosaka painongobuda inotanga kubuda, ok, chii chakaitwa neMozilla pakiyi kiyi nguva?, hapana kana chinhu. Zvakanaka, zviri nyore kwazvo, kana ini ndatovepo uye pakarepo voburitsa bhurawuza rinokurumidza kupfuura rangu, nderipi rinofanira kuva danho rangu rinotevera? nguva inogoneka, nekuti chrome yaive yatove kumberi, paakangoenda, aitova nebhenefiti. Uku ndiko kutanga kwehuipi hwe firefox, vasingazive maitiro ekugadzirisa izvo zvavainazvo mumaoko avo, dai vaiziva, nhasi, chokwadika paizove nechrome, asi yaisazonyanya kushandiswa, ingadai iri firefox, ndezvekukusiya iwe Mazai akasvinwa pachigadzirwa chenyeredzi, icho chiri nyore, hapachina.
J'utilise Firefox depuis le debut mais ces derniers temps, que fois qu'ils changent quelque chose, c'était mieux avant. Ini ndichataura kuti handizivi pamwe tout jeune et que j'aime the simple interfaces avec barre de menu, voir barre d'état, des onglets well marquis, pas comme leur nouvelles «merdes»… .. à la mode Debian quoi :)
Sezvo PC yangu yakaputsika ini ndine bhuku rekare rine 1gb ye RAM. Firefox haishandisike, inorembera zvachose. Ini ndinofanira kushandisa Edge kana Brave ..
Ini pachangu, zviri kuramba zvichitendeka kwandiri kuti pane kuburitswa kwekuzvidira kweprojekiti nevatungamiriri vayo.
Firefox ine dambudziko rimwe chete, ndiwo makwikwi evaya vanotonga internet, YouTube inoshandisa zviwanikwa zvakawanda muvhidhiyo imwe chete inenge 2GB ye RAM kungoona chimwe chinhu mu1080p. kune rimwe divi iyo yekumhanyisa kumhanya inononoka, ingangoita 1/3 yeiyo bandwidth yandinayo uye inonetsa zvakanyanya.
Fa iwe unoti Google inoda kuti ndipfuure captcha yekuvhara kubva kuFirefox. Izvo hazviende kune cap yeimwe browser uye ini handikurudzire kuipfuura. Isu hi heu trobat?
How ho fas? Kwete (Vivaldi ini Firefox)
Izvo zvakare iri pakati peFirefox neVivaldi, pane zvinodiwa. Pakupedzisira ini ndine entès nei em demanava iyo captcha. Quan vaig yekumisazve Mint, yaive provant de fer kushandira Google nemota padhuze nedambudziko uye kwete zvishoma sortia, nekuti sarudzo «inokanganisa mamwe ma motors padhuze» haitungamire kune peji rezvose, em sortien els complements. Abans meapareixia peji raunogona kusarudza Google. Llavors anozoisa iyo Google plugin, asi pese panopinda fenzi, inogadzirisa iyo Captcha. Pakupedzisira ndine trobat iri peji (https://linuxmint.com/searchengines.php) i ja ho tinc resolutiont. Ini handizive maitiro ekugadzirisa mune kumwe kugovera. Ndine urombo nazvo.
Izvo zvinonakidza kugona kuhwina muCatalan!
Izvi ndizvo zviri kuitwa neGoogle neFirefox: https://www.muycomputer.com/2019/04/16/google-ha-saboteado-firefox/
Ndosaka captchas dzinoonekwa kana iwe google uchibva kuFirefox.
Mesa 21.2 inosvika nerutsigiro rwekutanga rweApple M1, kugadzirisa kwePanfrost, Vulkan uye nezvimwe
Vvave, iyo imwe KDE mimhanzi inoridza iyo inounganidza ruzivo kubva internet